Ogaden News Agency (ONA) – 2014 – November
Q7aad – JWXO Waa Ururka Kali ah ee Faragalinta Itobiya Ka Madaxbanaan (Daawo Tijaabadii Prof. Zimbardo ).
Q6aad ee Taxanahan waxaan kusoo marnay in maleesiyadii Wayaanaha ee joogtay Ogadenia oo laga dhigay militariga Itobiya amar lagu siiyay in ay weerar ku qaadaan […]
November 25, 2014 / Warar	/
Waxaa silsilad noqday Xasuuqa Shacabka Ogadeniya xasuuqaaas waxaa Masuul ka ah Maaamulka Kililka Iyo Xukuumada Atoobiya. Maamulka kililka waajibaadkiisa waxaa ugu horeeya inuu Ciidanka Itoobiya […]
Jaaliyadda Sweden oo ku Mudaaharaaday Safaaradda Shiinaha ku Leedahay Stolkholm
Maalinamdii Sabtida oo taariikhduna ku beegnayd 20-11-2014 ayaa waxaa ka dhacay dalka Sweden gaadh ahaan Caasimada Stockholm Mudaharaad Safaarada Chinaha horteeda. Mudaharaadkaas oo loogasoo hor jeeday […]
Ururka Dhalinyarada Iyo Ardeyda Ogaden ee Jaaliyada Birmingham (OYSU Birmingham) ayaa xaflad lagu soo Bandhigay Hiddaha Iyo dhaqanka Somalida Ogadeniya ugu qabtay gabdhaha Soomaliyeed ee […]
November 24, 2014 / Warar	/
Waxaa maalimadii Axada shir muhiim ah isugu yimid Hawlwadeenada jaaliyada magaalada Edmonton. Shirka ayaa sidii dhaqanka ahayd waxaa lagu furay wacdi diini ah oo dhinacyo […]
Maamulka Faraca Jaaliyada Ogaadeeniya ee Uitenhage oo shirkoodii bilaha ahaa isugu yimid
Shirkan oo lagu gorfeeyo wax qabadka Faraca ee billaha ah ayaa guul ugu qabsoomay Maamulka faraca. Shirka ayaa waxaa laga akhriyay warbixin guud oo kusaabsanayd […]
Ogaysiis Muhiim ah oo ku Socda Jaaliyadda JOKA
Waxaa la ogaysiinayaa dhamaan xubnaha Jaaliyadda Ogaadeeniya ee Koonfur Afrika gaar ahaan Xubnaha Xarunta in uu jiro shirar aad u muhiim ah oo kakala dhici […]